Silicones kuratidza unoshanda maitiro zhinji - China Jution Silicone & Rubber
Kitchen mudziyo Set
Ice tireyi & kuutio
Bathing Brush & chako Cleaner
Kids & Baby akatevedzana
Silicone mwana fidha
Mudzanga Case & Ashtray
Silicones kuratidza kubatsira unhu zhinji
Silicones kuratidza kubatsira maitiro zhinji, kusanganisira: 
Low chafariz conductivity
Low namakemikari reactivity
Thermal kugadzikana (nguva dzose zvivako pamusoro navanopinda tembiricha siyana ° -100 kusvika 250. C).
Kugona dzinga mvura uye kuumba risingapindi mvura zvisimbiso.
Asingadi hachibvi substrates zhinji, asi inoomerera chaizvo zvakanaka nevamwe, eg girazi.
Haritsigiri microbiological kukura.
Kupikiswa okisijeni, ozone, uye ultraviolet (UV) chiedza. Pfuma Izvi zvakakonzera kushandiswa kwakapararira silicones pakuvaka indasitiri (semuenzaniso coatings, moto dziviriro, PANE zvisimbiso) uye motokari indasitiri (zvokunze gaskets, kwokunze Trim).
Electrical kuputira ehupfumi. Nekuti silicone zvinogona akagadzira kuva electrically insulative kana conductive, zvakakodzera zvakawanda magetsi mafomu.
High gasi permeability: pa nzvimbo tembiricha (25 ° C), kuti permeability kuti silicone rabha kuti magasi akadai okisijeni anenge 400 nguva [Citation inodiwa] kuti butyl rabha, zvichiita silicone zvinobatsira kwezvokurapa mafomu kwakawedzera aeration kunodiwa umo. Asiwo, silicone rubbers hazvigoni kushandiswa apo gasi-zvakasimba nezvisimbiso zvinokosha.
Silicone inogona atova rabha marata, apo ane mamwe ehupfumi, zvakadai sokuva FDA aiteerera. Izvi kunosvika raishandiswawo silicone marata kuti maindasitiri kuti zvinoda utsanana Somuenzaniso, zvokudya uye chinwiwa uye mishonga.
Post nguva: Jun-20-2018
Silicones kuratidza unoshanda characteris zhinji ...